Ezintlanu zokusebenza ze-DJ ezilungileyo ze-Android | I-Androidsis
Abasebenzisi abaninzi bane-DJ ngaphakathi, okanye bafuna ukuziqhelanisa ukuze bazive ngathi kunjani ukuba nye. Ngethamsanqa sinezinto ezininzi Izicelo ezikhoyo ze-Android ezisinika eli thuba. Enkosi kwezi zicelo sinokuba yi-DJ sisebenzisa ifowuni okanye ithebhulethi yethu. Ke, sinokudlala owethu umculo.
Uluhlu lwezicelo zolu hlobo lubanzi kakhulu. Kodwa, senze i ukhetho kunye neyona nto sinokuyifumana ngoku. Ke ukuba ufuna ukuba ngu-DJ kule mihla ikhethekileyo, ungayenza ngezi zicelo ze-Android. Ukulungele ukudibana nabo?
Kwanele nge thatha uhambo kwiVenkile yokuDlala ukuze ubone ukuba zininzi izicelo zolu hlobo ngokufanayo. Into edibanisa umsebenzi wokufumana efanelekileyo kuthi. Ke ngoko, siqhuba olu khetho lwezicelo.
1 Umxube we-edjing
2 I-DiscDj 3D
3 I-DJ Studio 5
5 Umnqamlezo dj
Ku malunga ne Isicelo esaziwayo nesaziwayo solu hlobo lwe-Android. Ukukhutshelwa kwayo sele kudlulile kwizigidi ezili-10, ke oko kunemvume yabasebenzisi kwihlabathi liphela. Insiza ine Umxhubi wekhonkco kabini. Ibandakanya nathi iziphumo ezintlanu zasimahla, okuseleyo kufuneka sikuhlawule. Ukongeza kwi-Automix, isilinganisi kunye nokurekhoda. Ke sinokwenza uvavanyo lwethu lokuqala ngokulula kwesi sicelo.
Ukukhuphela usetyenziso kusimahla. Nangona kunjalo, kwimisebenzi emininzi eyongezelelweyo okanye iziphumo kufuneka sihlawule. Kukho ukuthengwa okufikelela kwi-euro ezingama-80. Ke ukuba ufuna nje ukufumana amava kancinci njenge-DJ, ingxelo yasimahla yanele.
Umdidiyeli weedjing Umculo DJ
Es enye yeendlela zokusebenza ze-Android ze-Android ezikalwe namhlanje. Ke ikwazile ukoyisa abasebenzisi. Kule meko sine Umxhubi wediski ephindwe kabini, nangona ime ngakwicala lokunxibelelana kwayo ntathu. Ukongeza, sinezinto ezininzi ezisisiseko esinokukhetha ukuzenza ezethu iindlela zokuxuba. Njengokuba singongeza iziphumo, iisampulu okanye senze ii-loops. Ke sinokhetho oluninzi lokudala olufumanekayo.
La Ukukhuphela usetyenziso kusimahla. Ngaphakathi sifumana iintengiso, ezinokususwa ngentlawulo enye ye-2,19 euro.
Isidlali somculo seDisDD 3D -i-3D Dj Music Mixer Studio
I-DJ Studio 5
Omnye we Ezona zicelo zidumileyo zolu hlobo kwiVenkile yokudlala. Sisicelo esisinika itafile yokuxuba kunye neepleyiti ezimbini. Iyasivumela ukwazisa ukuya kuthi ga kwisibhozo kwiziphumo zexesha lokwenyani. Ukongeza ekubeni nakho ukufaka ii-loops okanye usebenzise isampulu yeepads ezili-10 ezenziwe ngokwezifiso ngokupheleleyo. Njengokuba sinokulingana kwaye sinokurekhoda iiseshoni zethu kwaye ungeze iingoma kuluhlu lokudlala.
Sisicelo esipheleleyo esisibonelela ngemisebenzi emininzi eyongezelelweyo. Ukukhuphela usetyenziso lwe-Android simahla. Ngaphakathi sifumana ukuthengwa okuthe kratya, nangona kungekho mfuneko yokonwabela yonke imisebenzi yayo.
U-DJ Studio 5 - UMxubi woMculo
Sisicelo esaziwayo esiza kusivumela yenza iiseshoni zethu zomculo kwifowuni yethu ye-Android okanye ithebhulethi. Eyona nto iphambili eyenza ukuba inomdla kakhulu kukuba yiyo idityaniswa neSpotify. Ke sinokwenza iiseshoni zomculo sisebenzisa iingoma ezivela kwinkonzo yokusasaza. Into esinika ukhetho oluninzi. Sinezinto ezininzi ezenziwayo, iisampulu kunye neziporo kwisicelo.
La Ukukhuphela usetyenziso kuneendleko ze-2,99 euro. Nangona kunjalo, akukho zinto zithengwayo okanye iintengiso ngaphakathi. Ke ayililo ixabiso eligqithisileyo nokuba.
ixabiso: € 2,99
Isicelo sokugqibela kuluhlu lolona loludala, kuba yenye yeyokuqala ukufikelela kwi-Android. Inye Umxhubi ngamacwecwe amabini. Isinxibelelanisi sesicelo esincinci kakhulu sigqamile. Iyonke sinayo Iziphumo zandi eziyi-16, Ukongeza ekubeni neeluphu, ukulinganisa, inkxaso kuluhlu lokudlala kunye nokurekhodwa kweeseshoni zethu. Ke isinika iindlela ezininzi ezahlukeneyo.
La Ukukhuphela usetyenziso kuneendleko ze-0,99 euro. Sinokuthenga ngaphakathi kweempawu ezongezelelweyo.
Umnqamlezo we-DJ Pro-Hlanganisa umculo wakho
ixabiso: € 7,99
Lo lukhetho lwethu kunye nezona zicelo zibalaseleyo ze-DJ ezikhoyo namhlanje kwi-Android. Siyathemba ukuba uya kufumana ezi zicelo zinomdla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ezona zixhobo zibalaseleyo ze-DJ ze-Android
I-OnePlus isungula isicelo sokuququzelela ukufudukela kwesinye isiphelo sendlela esiya kwi-OnePlus